Ntughari: Nkwuputa Aka na Ntanye Ozi | Martech Zone
Dika ndi ahia na-eme ka ndi nti chiri ha ka ha ghara ire ahia, o di oke nkpa na ndi ahia choputara ndi ha na akwado ha ma nye ha ihe ndi ozo di nkpa iji nyere aka na ahia ha. Nkọwapụta Ntuziaka ahia ahia na -emepụta usoro nkwado nke oke maka ụdị ndị kachasị.
Mepụta ihe gbasiri ike, mmekorita ikwalite nkwado ahụmịhe. Usoro ndenye aha maka akara gị ga-eme ka ọtụtụ ndị ahịa gị bụrụ ndị na-akwado ma na-eme ka mmata mara. Extole na-enye sọftụwia ire ere ahịa nke na-eme ka itinye aka ma nwekwuo mgbanwe gị.
Ntinye ederede na ntinye aha
Ntughari anya nke ntinye ederede ngwụcha maka njedebe na ahụmahụ
Ọmarịcha atụmatụ dị mma na ekwentị, na weebụ, ma ọ bụ na ngwa gị
Koodu òkè na mkpali nke ahaziri iche
Ahụmịhe ntinye aka na ntanetị na-eme ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịkekọrịta
Nkọwa asụsụ maka iru mba ụwa
Enginegwọ Ọrụ Injin
Ndị na-akwado gị na ndị enyi ha na-atụ anya ụgwọ ọrụ ozugbo, ị nwere ike ịhazi ihe ndị a iji zuo oke maka mgbasa ozi ahịa ọ bụla. Nkwụghachi ụgwọ oge na-eme ka afọ ojuju na-agba ume ma na-agba ume ka ịkekọrịta na ndị ọzọ. Anyị enwetakwala nchedo wayo, yabụ ị nwere ike ichedo akara gị na oke gị.
Jikwaa ọtụtụ ụdị ụgwọ ọrụ, ma nke dị n'ime ma nke mpụga
Kwụghachi ụgwọ na Kupọns, isi iguzosi ike n'ihe, kaadị onyinye, na ndị ọzọ site na injin ụgwọ ọrụ anyị
Obi dị ndị ahịa ụtọ inye onyinye zuru oke, nke a nwalere
Nye nkwado maka ụgwọ ọrụ mba ụwa
Hazie ụgwọ ọrụ maka mkpọsa ọ bụla, yabụ ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị na-agba ume na-arụ ọrụ
Debe iwu dị iche iche iji chọpụta ma gbochie ndị na-edeghị aha dị ala.
Addị Nkwado Akaụntụ
The Extole ikpo okwu na-eme ka ọ dị mfe ịchọta na iru nnukwu influencers. Ndị ahịa gị kachasị mma - ndị na-ekekọrịta na ndị na-aza - bụ uru gị pụrụ iche. Jiri usoro netwọkụ mbụ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe gị gbasara ndị na-akwado gị iji mee ka mbọ ahịa gị sie ike.
Ngwanrọ ngwanrọ nke oge a na nke echekwara nke ọma na nkewa na mkpesa iji ghọta ndị ndị na - akwado gị na etu ha si ekerịta
Ezigbo akụkọ banyere ndị na - ekenye gị ihe kachasị, ndị na - eme ihe ọ bụla, na ndị ọkwọ ụgbọ ala
Easy, akpaka chọpụtara nke influencers, ika akwado, na netwọk
Nkọwapụta nke ọma nke ndị na-akwado gị site na iji data sitere na nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Nye ndị na-akwado ndị kwesịrị ekwesị ụgwọ ezigbo oge
Ebumnuche na Ule
Site na iche ndị na-ege ntị, Extole na-eme ka ọ dị mfe ịkwanye ụgwọ ọrụ, ọdịnaya, na ọbụna iwu azụmaahịa dabere na ngalaba ndị na-ege ntị dị iche iche. Ikike a na-eme ka ụlọ ọrụ na-ejikwa ọtụtụ mmemme n'otu oge. Na mgbakwunye, mmemme ọ bụla nwere ike ịnwe ụdị dị iche iche iji wee lee / b nwalee akụkụ ọ bụla nke usoro ntinye aka gị.
Nwalee okike, onyinye, na iwu ahia iji ghota oru.
Jiri ngwa dị iche kenye ndị mmadụ dị iche iche ihe omume dị iche iche ka ha nwee ike nweta ahụmịhe haziri ahazi.
Jikwaa mmemme, mkpọsa, na ule na otu dashboard na-enye nghọta na njikwa ozugbo.
Ikike Ntuziaka Nzipu Nzuzo
Extole na-enye ọtụtụ atụmatụ na ike dị elu nke na-enyere gị aka ịgbatị iru na mmetụta nke ịre ahịa gị.
Rewardgwọ ọrụ na-abawanye ụba na-akpali akpali ịkwalitekwu ma mee ka mmemme gị dị ọhụrụ.
Kwe ka ndị ahịa gị kekọrịta ihe ụfọdụ ka ha nwee ike ịkwado ọ bụghị naanị akara gị kamakwa ngwaahịa zuru oke.
Soro ndị na-eme ihe ike na mkpọsa Extole pụrụ iche nke na-eso ma na-akwụghachi ha ụgwọ.
Maara na-atụ-a-enyi mmemme kwesịrị ịbụ esemokwu-free. Ikekọrịta na ịkọwapụta ga-adịrị ndị ahịa gị mfe dịka o kwere mee. Ngwa anyị dị ike na webhooks na-enye ndị ahịa gị ahụmịhe na-enweghị nhịahụ gafee ngwa gị yana weebụsaịtị, n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ ha na-eji.
Ntuziaka ahịa API bụ ebumnuche wuru maka ngwa mkpanaka
Mmekọrịta na ekwentị onye ahịa gị yana nyiwe mmekọrịta mmekọrịta
Na-arụ ọrụ n'akụkụ ngwa-nsuso ngwọta
Melite nkwalite dị mfe na ịkekọrịta maka ndị na-azụ gị site na API anyị
Mepụta API zuru ezu, nke okike maka ahụmịhe onye ọrụ ahaziri
Dọọ API-kwadoro ntụgharị na ụgwọ ọrụ
Nweta ngosipụta ngosi
Tags: ika akwadoNkọwazoo-a-enyiOzi Ntuziakaòkè Koodu